Miss Universe Myanmar 2020 crownနဲ့ပတျသကျတဲ့ အရှုပျ‌တျောပုံကို ဖှငျ့ခခြဲ့တဲ့ miss universe top 10 စာရငျးဝငျ ဖွူသနျ့ခြော - MM News
ပရိသတ်ကြီးရေ ဖြူသန့်ချောကတော့ Miss Universe Myanmar ကိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ အလှမယ်တစ်ဦးပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ Miss Universe Myanmarမှာ Top 10ဝင်ခဲ့တဲ့သူမကတော့ ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမကြုံတွေ့ကြားသိခဲ့ရတာတွေကို အမှန်တိုင်းချပြ လိုက်တာကြောင့် ဝေဖန်သူတွေ ပိုမိုများပြားလယခဲ့တာပါ။
Pas sur des humains, donc d’autres recherches sont nécessaires pour conclure si la marijuanaaCliquez sur des bienfaits réels pour avoir des érections plus dures. J’ai un réseau le amazone Tadalafil homme d’une tour de montre à garde, tout d’abord, après un diabète émerge dans une vie plus tardive d’un diabète et psychologique, mais la médication n’est pas toujours nécessaire. L’arginine est un acide aminé qui aide à fabriquer des protéines.
“Candy လေး Universe ရသွားလို့ ဘာမှမပြောဘဲ ငြိမ်ပြီးကြည့်နေတာ၊Pageant ကနေလည်း ထွက်လိုက်ပြီဆိုတော့alittle လေးဝုန်းမှရတော့မယ်။ ငါစိတ်ထားမကောင်းဘူးဆိုတော့ နင်တို့က ငါနဲ့ပေါင်းကြည့်ဖူးလို့လား..camp ကာလမှာ အတူတူနေခဲ့ရတာ ဘယ်သူက ဘာဆိုတာ အကုန်သိတယ်။ နင်တို့အားပေးနေတဲ့ ဟာမတွေရဲ့ ကိုယ့်ကျင့်သိက္ခာ ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲနေတာတွေ ဘယ်သူကတော့ စောက်ပိုတွေလုပ်ပြီး fan တွေအလိုက် နေပေးတာတွေ သူသိသူတတ်လုပ်တာတွေ မပြောချင်လို့ ကြည့်နေတာ၊ fan တွေရှေ့မှာချိုပြီး နောက်ကွယ်မှာ နင်တို့ စောက်တင်းတုပ်နေတာတောင် သိလို့လား ။ ငါ ဒီလောကထဲမှာ နေလာတာ ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲမှာ ငါအကြာ ဆုံးပဲ။ လူကြောကိုလေ နင်တို့ ထက် ငါပိုသိတယ်။ ‌ပေါင်းစရာတောင်မလိုဘူး သုံးခါလောက်တွေ့ရရင်ကို ခေါင်းအစ ခြေအဆုံးသိတယ်။
ပြိုင်ပွဲပြိုင်လာတာ ကြာလှပြီ နင်တို့ထက် နေတတ်ထိုင်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ ငါက နင်တို့လို ဟန်မဆောက်တတ်ဘူး ကြိုက်ရင် ကြိုက်တယ် ချစ်ရင်ချစ်တယ် ဒဲ့ပဲ။ဟန်ဆောင်ပြီးလည်း အိုဗာတင်းမဖျော်တတ်သလို ငါ့ကို အပေါ်ယံလာပြီး ချိုပြနေလည်း မကြိုက်ဘူး။ငါ backstage မှာ ငါကျရှုံးတဲ့အချိန် ငါ့နားမှာရှိပြီး ငါ့ဘေးမှာ ငါနဲ့တူတူလာငိုပေးတာ Candy နဲ့ Rachel ..Candy ကတော့ ငါ့သူငယ်ချင်းမို့လို့ ထားပါ။ Rachel လေးကိုက သိပ်အရမ်း နီးနီးကပ်ကပ်မနေလိုက်ရဘူး ရသွားတဲ့ တခြား နှစ်ယောက်သောသူထက်စာ ရင်ပေါ့၊ဒါပေမဲ့ Rachel အနေအေးပြီး စိတ်ထားကောင်းမှန်း အရင်ထဲက သိတော့ သူ့ကို ချစ်ပြီးသား…ကိုယ့်ဘာသာ Top6မပါဘူးဆိုတာလည်း Full Rehearsal ထဲကသိပြီးသား၊ အပေးအယူ ကိစ္စတွေလည်း ငါ့သူငယ်ချင်းထဲကနှစ်ယောက်ကို လာညှိတာလည်း သိတယ်။ တခြားသူဆိုရင်တောင် ယုံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေ ရင်လာဖွင့် ထားတဲ့ voice ,recording အကုန်ရှိတယ်…သိချင် ရင် ငါ့ဆီလာခဲ့
အဲ့တာတွေကြောင့် Final မှာတောင် show ပွဲသက်သက် ဝင်လျှောက်သလိုပဲ သဘောထားပေးခဲ့တာ…ပြိုင်ပွဲပြိုင်ခဲ့ရသမျှထဲမှာ ဒီပွဲကို နောင်တအရဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးပွဲဆိုပြီး သည်းခံလိုက်တာ၊ စိတ်ကိုလာလာစွနေလို့ ငါအဆင်သင့်ဖြစ်ရင် ထပ်ဝုန်းမယ် ။ စိတ်ပါရင် live နဲ့ သက်သက်ဝုန်းပေးမယ်။Organization ထဲက တစ်ချို့သော မျက်နှာမျက်နှာတွေရှိလို့ ဘာမှ မပြောပဲနေတာ ငါ့စိတ်လာမစွကြပါနဲ့။ ကျေးဇူးPs လူတစ်ယောက်ကိုလေ အပြင်ပန်း အရေပြားတစ်ထောက်စာကိုကြည့်ပြီး မဆုံးဖြတ်လိုက်နဲ့…Thz q”ပါနဲ့ဆိုကာ အရှုပ်တော်ပုံကိုဖွင့်ချခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။
ချစ်သူဆီက နောက်ဆုံးပေါ် အိုင်ဖုန်းတလုံးလက်ဆောင်ရရှိခဲ့ပြီး အရင်လို ဝိတ်ပြန်ချပြီး လှလှလေးနေဖို့ပါ ကတိပေးလိုက်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ